Naka Sarintena Nanao Lafika Ny Hotely Nidedaka Tao Dubaï, Roa Nosamborina Avy Eo Navotsotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Janoary 2016 2:02 GMT
“Sarintena faran'izay tsy mendrika”, izany no nisokajiana ity sarintena nalainà Koetiana mpivady ity ary nozarainy tao amin'ny Instagram. Olona roa hafa nandefa sarintenan'izy ireo koa no nosamborina ary navotsotra avy eo
Lehilahy roa naka sarintena niaraka tamin'ilay hotely The Address misy rihana 63 nirehitra tao Dubaï nataony sary lafika, ary nandefa izany tao amin'ny tambajotra sosialy no nosamborina — avy eo navotsotra hoy ny WAM, masoivohom-baovao ofisialin'ny Emirà Arabo Mitambatra.
Araka ny WAM:
Nilaza ny lehiben'ny fampanoavana fa taorian'ny fihainoana ireo vavolombelona rehetra dia nanapaka hevitra ny hamotsotra ireo tovolahy roa ny Fampanoavana ao Dubai taorian'ny fanadihadiana sy famerenana nijery ilay sary nalefany ary ny antontan-taratasy fitoriana.
Nakaton'ny Fampanoavana ilay raharaha satria tsy misy mihitsy porofo manameloka ireo tovolahy ho nanao heloka bevava.
Niantso ny tsirairay mba hitandrina sy ho mailo ny lehiben'ny fampanoavana rehefa mandefa zavatra ao amin'ny tambajotra sosialy, tsy handeha amin'ny fanelezana tsaho, fanalàna baràka ny hafa na ny fanimbazimbàna ny fahalalahan'ny olona, mba tsy hisy hihoatra ny voafaritry ny lalàna.
Tsy misy fanampim-baovao azo raisina mahakasika ny zompirenen'ireo olona roa nosamborina ireo, na ny sary nozarain-dry zareo.
Nandevona ilay hotely lafovidy mijoalajoala manana halavàna 300 m ny afo ny alina nialoha ny Taombaovao, hotely teo akaikin'ilay tranobe manaka-danitra avo indrindra manerana ny tany, Burj Khalifa. Raha kely indrindra dia olona 16 no naratra tamin'ilay firehetana, ary tsy nisy aina nafoy raha ny tatitra.
Ao amin'ny YouTube, Kirill Neiezhmakov mizara ny fahafatesan'ny afo.
Notenenina tao amin'ny media sosialy ihany koa ireo Koetiana mpivady nandefa tao amin'ny Instagram ny sarintenan-dry zareo misy ilay afobe miredareda nataony lafika, narahan'ity hafatra manaraka ity:
“Arahaba NahatratraTaombaovao ry Dubai Malalako. Andriamanitra anie hitahy sy hiaro anao. Manao zava-mahazendana ho anay hatrany ianao miaraka amin'ireo afomanga goavana.”
Hita ao anatin'ireo fanehoankevitra amin'izy io ny hoe “Sarintena faran'izay tsy mendrika.”
Na teo aza ny afo, tsy nanakana ny fisian'ny afomanga goavana teo akaikin'ny Burj Khalifa izany.